सिनेमा समिक्षा : आधा लभ
By soniya on	 11th June 2017 समाचार, समिक्षा
डिभोर्स चाहेकी सिंगल मदर । कास्टिङ काउचमार्फत हिरोइन बन्न चाहने तरुना । अल्जाइमर पीडित पत्नी स्याहार्ने वृद्धा । समाजमा खुल्न नसकेको समलिंगी जोडी । यौन कुण्ठाले ग्रसित तर सहृदयी मन भएको गेटपाले । बालश्रम शोषण गर्ने निरकुंश गृहणी । काठमाण्डूको एक बहुतले अपार्टमेन्टमा बसोबास गर्ने भिन्न स्वभाव भएका पात्र हुन् यी । सहरमा रिलिज सिनेमा ‘आधा लभ’ यिनै स्वभावबाट उत्पन्न द्धन्द्धको वरपर फन्को मार्छ ।
‘मुखौटा’ निर्देशक अर्पण थापा दोस्रो निर्देशकीय सिनेमामार्फत कमब्याक छन् । यसपटक थापाको निर्देशनमा परिपक्वता महसुस गर्न सकिन्छ । कथा वाचनमा संवेदना घोलेका छन् । प्रायः श्यामश्वेत पात्रमा उभिन चाहने उनी यसपटक ‘ग्रे रङ’को फिल्मका निर्देशक छन् । ‘आधा लभ’को सोच, प्रयत्न र अन्वेषण नवीन एवं ताजा लाग्छ । यसले सहरमा बढ्दो अपार्टमेन्ट संस्कृतिको डार्क पाटो चित्रण गर्छ । मध्यमवर्गको उदयसँगै सुरु अपार्टमेन्ट संस्कृति, अग्रगामी देखिने खोज्ने तर यथास्थितीमै रमाउने चाहने वर्गीय ढोंगीपनलाई गजबले चित्रण गरेको छ ।
तर, कहिलेकाहिँ खैरो रङ अन्यौलको रङ भैदिन्छ । त्यहाँ सिल्भर लाइन कोर्नु कठिन कुरा अवश्य हो । निर्देशकको यही अन्यौल सोचको शिकार आधा लभ भैदिएको छ । सिनेमाको जानरा ड्रामा भएपनि निर्देशकले व्यक्तिगत आकांक्षामा जबर्जस्ती अर्को जानरा अर्थात थ्रीलर एवं सस्पेन्स स्थापना गर्न खोजेका छन् । यसले दर्शकीय बौद्धिकतालाई कम आंकलन गर्छ जुन फिल्मको समस्या हो । थ्रीलर तत्व ‘आधा लभ’का लागि अनावश्यक जानरा हो ।
पात्रहरु समानान्तर भएपनि मुख्य पात्र ऋचा शर्मा हुन् जो छोरी र श्रीमानबाट अलग छिन् र अपार्टमेन्टमा बस्छिन् । तर, फिल्म सुरु नभैसक्दै ऋचा र उनका श्रीमान अलग भैसक्छन् । जसले गर्दा उनीहरुबीचको सम्बन्धको जर्नी र द्धन्द्ध दर्शकले महसुस गर्न पाउँदैनन् । अलग भएछन् भनेर दर्शकले सूचना त पाउँछन् तर त्यो परिस्थितीसँग दर्शकको मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित हुन पाउँदैन । लेखकले पात्रको लक्ष्य स्थापना गरेपनि सम्बन्धको विकास र पात्र स्थापनामा छिपछिपे काम भएको छ । यसले पात्र र दर्शकबीच अन्तक्रिया हुन पाउँदैन ।
ननलिनियर शैलीमा निर्देशकले समानान्तर र पात्र परिस्थिती खडा गरेर कथा वाचन गरेका छन् । ‘आधा लभ’को सशक्तता यसको सोच र कन्टेन्ट उठान हो तर, सिनेम्याटिक भाषा यसको कमजोरी हो । सतहीरुपमा एजेन्डा र पात्रमाथि छामछुम प्रयत्न भएको छ । यद्यपी, वास्तविक नेपाली समाजको एक पाटोलाई चित्रण गर्नु भने स्वागतयोग्य छ । यसले चरित्र चित्रण र मनोविज्ञानलाई सम्बोधन अवश्य गर्छ ।
केन्द्रिय द्धन्द्ध के हो प्रष्ट छैन । पात्रैपिच्छेका द्धन्द्धमाथि न्यारेटिभ बुनिएकाले दर्शक उल्टै कन्फ्युज हुन्छन् । बरु, एउटै द्धन्द्धमाथि सिनेमा बनेको भए अब्बल क्राफ्ट बन्नसक्थ्यो । आधा लभ कसको कथा हो ? सिंगल मदरको ? समलिंगी पे्रमको ? सन्तानबाट परित्यक्त वृद्धावृद्धाको ? ढोंगीपन प्रदर्शन गर्ने मिडल क्लासको ? कास्टिङ काउच खेपेकी युवतीको ? यौनकुण्ठा व्यक्त गर्ने गेटपालेको ? मालिक्नीबाट कुटिने बालकको ? छरपस्ट कथावस्तु भएकाले फिल्म आख्यान (फिक्सन) संरचनामा छैन ।
समलिंगी प्रेम सम्बन्धलाई चित्रण गजब छ । कास्टिङ काउचमार्फत मोडल र अभिनेत्री हुने खोज्ने युवती पात्रलाई संवेदनाभन्दा फनको रुपमा चित्रण छ । उक्त युवती पात्र रुँदा संवेदना महसुस हुँदैन । अल्जाइमजर रोग भनेर किटान गरिसकेपछि त्यसलाई गहिराइमै चित्रण गरिनुपथ्र्यो । हेल्थ ड्रामाअनुसार चरित्र चित्रणमा अल्जाइमर रोगीका आफ्नै विशिष्ठ लक्षण हुन्छन् । आधा लभको समस्या पटकथा लेखनमा छ । ऋचा, रेमनदास श्रेष्ठ, बिपिन मिकी गुरुङ, रोजिशा शाहीको अभिनय फिट छ ।
तपाईंलाई ड्रामा जानराका फिल्ममा रुचि छ भने आधा लभ तपार्ईंका लागि योग्य हुनसक्छ ।
सिनेमा : आधा लभ
कास्ट : ऋचा शर्मा, रोजिशा शाही, रेमनदास श्रेष्ठ, बिपिन मिकी गुरुङ, टीका पहारी, मिथिला शर्मा, अर्पण थापा
निर्देशक : अर्पण थापा
निर्माता : ऋचा शर्मा